Nagu saabsan - Jiangxi Alutile Dhismayaasha Qalabka Co., Ltd.
Jiangxi Alutile Dhismayaasha Qalabka Co., Ltd. waa shirkad wadaag ah oo kayd ah oo ku shaqaysa sida ku xusan shuruudaha iyo qawaaniinta shirkadda ku qoran, shirkaddeeda haysaa waa HONGTAI GROUP. Maaddaama mid ka mid ah ganacsiyada ugu horreeya ay soo saaraan guddiga aluminium ee Shiinaha, Alutile wuxuu diiradda saaray cilmi-baarista, soo-saarka, iibka iyo adeegga nidaamka darbiga biraha in ka badan 20 sano. WALIGU wuxuu haystaa xuquuqda madax-bannaanida aqooneed ee madax-bannaan ee badeecooyin badan.
In kabadan 20 sano oo khibrad ah soosaarida darbiyada daahyada-darbiga iyo waqtiga curyaaminta bey'ada-saaxiibtinimada & hal-abuurka dalabka, waxaan nafteena u hurnay bixinta alaab tayo sare leh macaamiisha. Alaabtayada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah Aluminium Iskudarka Aluminium, Dhammaan Qaybaha Aluminiumka Qiyaasta ah (3A panel), Solid Aluminium Solid ah, Gudbinta Kuleylka kuleylka ee Sanduuqa, Guddiga Qurxinta Deegaanka, Silicon Sealant Glue iwm
Sida aasaaska ugu weyn sayniska iyo horumarinta cilmi-baarista ee Wasaaradda Dhismaha Shiinaha, shirkadeennu waxay xoogga saartaa sayniska iyo tikniyoolajiyadda iyo xakamaynta tayada adag. Dhammaan alaabta ceeriin iyo alaabooyinka dhammeeya waxaa si adag loo tijaabiyaa qalab casri ah oo laga keeno Mareykanka, Jarmalka iyo Japan.
In ka badan 20 sano oo koorso adag ah, ALUTILE wuxuu horumariyay kuna koray sahaminta iyo kudhaqanka talaabo talaabo ah, qalabka daahyada birta ah waxaa lagu iibiyay in kabadan 100 wadan iyo gobolada aduunka oo dhan, waxay noqdeen shirkada ugu saameynta badan warshadaha.
Ku xigeenka agaasimaha shirkadda aluminium guddi isku dhafan ee Shiinaha Dhismaha Qalabka Association
Mid ka mid ah jilayaasha ugu muhiimsan ee heerka qaran ee aluminium darfaha isku dhafan.
Saldhigga tababarka maaraynta tayada ee Shiinaha aluminium aluminium waxsoosaarka warshadaha isku dhafan
Sayniska iyo tikniyoolajiyada cilmi baarista iyo horumarinta xarunta Wasaaradda Sayniska iyo Machadka Cilmi-baarista Macluumaadka
Shirkadaha farsamada sare ee muhiimka ah ee Barnaamijka Tooshka Qaranka
Shirkada qiimeynta amaahda canshuuraha ee heer qaran